Maleeshiyaadkii Magaalada Marka ee Gobolka Shabeelaha Hoose oo laga qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maleeshiyaadkii Magaalada Marka ee Gobolka Shabeelaha Hoose oo laga qaaday
Xuseen Axmed 30 December 2015
Marka ( Mareeg.com)-Isagoo u warramayay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho Jeneraal Yuusuf Cageey oo ah Taliyaha Ciidamada la geeyay Magaalada Marka ayaa sheegay in Maleeshiyadii ku sugneed Magaaladaasi laga saaray gebi ahaan.
Jeneraal Cageey ayaa tibaaxay in magaalada ammaankeeda iminka uu yahay mid wanaagsan islamarkaana la geeyay daafaha Magaalada Maleeshiyadii ku dirireysay halkaasi.
Magaalada Marka ayaa dhawaan waxaa ka dhacay dagaal beeleed khasaaro sababay kaas oo u dhexeeyay labo maleeshiyo beeleed ee wada degenaa halkaasi.
Iminka ayaa xaalada Magaaladaasi tahay mid degan iyadoo dadku ay ku diirsanayaan xasiloonida degmadooda haatan ka jirta.
Dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay magaalada Mandhera